Dalkaan.com -Wararka Ugu Danbeeyey » Kheeyre maxuu ka dalbaday Wakiilada Beesha Caalamka?
Kheeyre maxuu ka dalbaday Wakiilada Beesha Caalamka?
Xasan Cali Khayre Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) ayaa kulan looga hadlay wax ka qabashada baahiyha ka jira deegaannada koonfur Galbeed, waxa uu magaalada Baydhabo kula yeeshay safiirradda dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya iyo wakiillada hey’adaha caalamiga ah ee fadhigoogu yahay Muqdisho.
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Ra’iisul Wasaare Khayre ku wehliyay kulanka, ayaa soo bandhigay qorshayaasha horumarinta bulshada iyo deegaanka ee muhiimka ay tahay in laga taageero si loo gaaro horumarka iyo himilooyinka bulshada Koonfur Galbeed.
Khayre oo qorshaha socdaalkiisa Koofur Galbeed uu salka ku hayay horumarinta adeegyada bulshada iyo amniga, ayaa safiirrada u sheegay in lagama maarmaan ay tahay in ay qayb ka qaataan qorshaha horumarinta Koonfur Galbeed.
Previous articleHowgalo culus oo laga fuliyay Gobolka Sh-dhexe
Next articleMadaxweyne Waare oo kulan la qaatay Saraakiishii Baladweyne gaartay (Aqriso)